Kika အီမိုဂျီ Keyboard ကို | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Kika အီမိုဂျီ Keyboard ကို
Kika အီမိုဂျီ Keyboard ကို APK ကို
Kika Keyboard ကိုတစ်ဦးစမတ်မျိုးစုံ themes များပါရှိသည်ထားတဲ့ Android အတွက်ကီးဘုတ်, စာလုံးတွေ, အသံတွေကိုနှင့်အခြားအော်ဟစ်အသစ်ကလုပ်ငန်းဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါအားလုံးအသုံးပြုသူများအတွက်ကို download လုပ်ပါရန်မတုံ့အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်! အဆိုပါ feature အသစ်များကျိန်းသေသင်တစ်ဦးအံ့အားသင့်အားငါပေးမည်!
ဤသည်ကိုအတူတကွ input ကိုအီမိုဂျီပိုပြီးအဆင်ပြေစေပါသောသာမန်အင်္ဂလိပ်ကီးဘုတ်နှင့်အတူ ...... နေရာတိုင်းထိုကဲ့သို့သောအီးမေးလ်, Twitter, sms ကိုအဖြစ် input ကိုအီမိုဂျီ icon တွေကိုရန် Keyboard ကိုဖြစ်ပါတယ်။
- 3000 အခမဲ့အီမိုဂျီထက်အပြည့်အဝအီမိုဂျီ, အပြုံးပုံ, ရုပ်ပြောင်နှင့်စာသားမျက်နှာ display ကို & ပို
- နေရာတိုင်းမှာအဆင်ပြေသတင်းစကား, စာသား, အီးမေးလ်, မှတ်စု, အဆက်အသွယ်, sms ကိုနဲ့တူ Input အားအီမိုဂျီ
- တခြားဖုန်း Messaging ကိုရုပ်ပြောင်
- ပြောင်းလဲနေသောမျော preview ကိုနှင့်အတူလက်ဟန်စာရိုက်
- ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားများအတွက်ကျော် 30 အဘိဓါနျ
- Next ကိုစကားလုံးအကြံပြုချက်များနှင့်လက်ရှိစကားလုံးပြီးစီးမှု
- auto-အရင်းအနှီး (တစ်ဦးချင်းစီဝါကျ၏ပထမဦးဆုံးစကားလုံးကြီးလုပ်ရန်)
- ပံ့ပိုးမှု Left ကျစ်လစ်သိပ်သည်း, ညာဘက်ကို Compact, လက်မ layout ကို
- ပံ့ပိုးမှုအသေးဆုံး, အသေးစား, Normal, အကြီးစား, အကြီးဆုံးမြို့ layout ကို
- ဆွဲယူ input ကို (/ ပွတ်ဆွဲအက္ခရာများမှတဆင့်လျှောခြင်းဖြင့် Input ကိုစကားလုံးတစ်လုံး)
- QWERTY / QWERTZ / AZERTY / Dvorak / Colemak / PC ကို input ကိုစတိုင်
- သီးခြားရုပ်ပြောင်ကီးဘုတ် mode ကို
- Keyboard ကိုအရောင် setting ကိုနှင့်ကီးဘုတ်နောက်ခံပုံများ
- Keyboard ကိုဆောင်ပုဒ်၏ကြင်နာမှု
- တင့်တယ်ကီးဘုတ် UI ကို။
- လက်ဟန်ဆလိုက် input ကို။
- Key ကိုစာသားအရောင်နှင့်နောက်ခံအရောင်။
- Keyboard ကိုနောက်ခံ။
- အကြံပြုရန်နှင့် preview ကိုအရောင်။
- Keyboard ကို Wallpaper အဖြစ်စိတ်တိုင်းကျသင့်ရဲ့နဲ့တူပုံတစ်ပုံ။
- အင်္ဂလိပ် input ကို၏အကြံပြုချက်ကိုပံ့ပိုး, ကပိုပြီးအကြာတွင်ထောကျပံ့ပေးလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ Keyboard ကိုဖွင့်ဖို့, အိမ်ကိုသွားကျေးဇူးပြုပြီး -> Setting-> ဘာသာစကား & Keyboard ကိုလုပ်ပြီး enable လုပ်ဖို့ Kika Keyboard ကိုစစ်ဆေးပါ။
"ဒီကီးဘုတ်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒေတာစုဆောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ " ဟုကျနော်တို့အလေးအနက်ထားသင့်ရဲ့ privacy ကိုယူ Kika Keyboard ကိုသက်ဝင်အခါသင်သတိပေးလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ Kika Keyboard ကိုစကားဝှက်သို့မဟုတ်ခရက်ဒစ်ကဒ်အင်ဖိုအပါအဝင်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဒေတာစုဆောင်းမထားဘူး။ သငျသညျကီးဘုတ် enable အခါသတိပေးသတင်းစကားကိုမဆို Third-party ကီးဘုတ် app ကိုများအတွက် Android ကိုတစ်ဦးစံသတင်းစကားဖြစ်ပါတယ်။
ဆာဂျီယို Piatti, Beatriz, လောနိတျမွို့ Schallmair
တချို့ဖုန်းတွေမှာဇာတိ app ကိုဖုန်း system သည်ဖော်ပြရန်ထောကျပံ့ပေးမထားဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အရောင်ရုပ်ပြောင်ကိုကြည့်ပါ, ဒါပေမယ့်တတိယပါတီ app ကိုအချို့အတွက်ဖော်ပြရန် ok ဖြစ်ပါတယ်လို့မရပါဘူး။
မေး / ဖြေ
Q.Why ကရုပ်ပြောင်နဲ့အတူအလိုအလြောကျ MMS ကိုကူးပြောင်းသလဲ
တစ်ဦးက: - က Settings များ - SMS / MMS ကို 1.On စာသားမက်ဆေ့ခ်ျ (SMS) setting များကို 2.Select Input Mode ကို - ဂျီအက်စ်အမ်အက္ခရာကိုမက်ဆေ့ခ်ျမှ 3.Go ။ သင်ဆဲဤပြဿနာကိုဖြည့်ဆည်းခဲ့လျှင်, pls Samsung ကရောင်းချသူနှင့်တိုင်ပင်ပါ။
ဘာသာစကား Armenian (အာမေးနီးယား)
Kika Keyboard ကိုရေးအဖွဲ့: အားဖြင့်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်
ဧပြီလ 10, 2017 မှာ 3: 48 နံနက်
ဇူလိုင်လ 7, 2016 မှာ 3: 47 နံနက်
အကြှနျုပျ၏မီးဖုန်းကိုအကြှနျုပျဘာသာစကားနှင့်ကီးဘုတ် setting တွင် kika ကီးဘုတ် enable လုပ်ဖို့ option ကိုမပေးပါဘူး
100% က Android says:
ဧပြီလ 2, 2016 မှာ 3: 49 ညနေ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်ကြောက်မက်ဘွယ် Keyboard ကို